Caccabuun xiyyaara 737 Max Booyingiif maal akeeka? - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Xiyyaara Boeing 737 Max-8 isa caccabe
Addunyaa aveeshinii keessatti kan itti siqu kan hin jirre Boeing, rakkoo hamaa keessa jira.
Yoo argannoon ka'umsaa qorattoonni gaggeessaa jiran mirkanaa'eef, xiyyaarri biraandii haarawaa 737-Max 8 sababa sisteemiin haaraa xiyaaricha irratti tolfameen hojiin isaa dhaabe, kan jedhu balaadha.
Ragaawwan jiran hunduu gara sababii balaa xiyyaara moodela walfakkaataa lama yeroo baatii shanii keessatti rakkoon walfakkaataa mudatee agarsiisaa jira.
Rakkoon ka'umsa balaa xiyyaaraa isa lamaffaa kan isa ji'a shaniin duraa waliin wal fakkaachuun waan hundaa haalaan hammeesseera.
Maatiin lammiilee Keeniyaa Boeing fi Daandii Xiyyaara Itoophiyaa himachuufi
Yeroo ammaa ka'umsi balaa kanaa maal akka ta'e yeroo qoratamaa jirutti, Boeing irratti rakkoon walguuraa jira.
Xiyyaara caccabe kanaaf eenyutu maqaa ta'a?
Malli haarawaan ittiin akka xiyyaarri hin dhaabbanne taasisu (anti-stall) Max irra jiru daataa miiressituu (sensor) baaqqee gara fuula duraa xiyyaarichaa irratti argama.
Dogogorri daataa miiressituu baaqqeen irraa dhufu xiyyaarri Idoneeshiyaa Lion Air jedhamu balali'uuf ka'ee yeroo gababaa keessatti akka funyaan isaa irraan gadee seenu taasiseera jedhamee amanama.
Goodayyaa suuraa simuleetara 737
Ragaan akka agarsiisutti sababiin Xiyyaara Itoophiyaa ET302 sababuma kana waliin walfakkaata.
Siisteemichi sun awutomaatika waan ta'eef irra deddeebiyee dadammaqa waan ta'eef paayileetoonni Lionair balalii 610 funyaan xiyyaarichaa deebisee ol dhaabutti siisteemiin xiyyaara dhaabu deebi'ee funyaan xiyyaaraa akka irraan gadi seenu taasisa.
Xiyyaarri ET302 akkasuma haala walfakkaatuun funyaan isaa irra deddeebiyee gugguufaa akka tureefi akka gabaasa bu'aa qorannoo marroo jalqabaatti paayileetonni qajeelfama Boeing hordofaniiru.
Garuu xiyyaara sana irra deebiin to'achuudhaaf ga'aa hin turre.
Akka barreessaan 'qajeelfama tekinikaa Boeing' Kaaap. Brady, jedhanitti rakkoon uumame kun dhimmoota hedduu keessa ilaalamuu qaban taasiseera.
"Sadarkaa awutoomeeshinii xiyyaarrichaa, sistemoota duubaan jiran, adeemsa xiinxala balaa Boeing keessatti taasifame, warra to'atanii akkamitti akka ilaalame, leenjii itti barudhaaf taasifame, sadarkaa leenjii waliigalaa, dandeettiin gartuu hojjetoota balalii.
Balaa uumame kana hunda waliin walqabatee kunneen hunduu keessa deebiin ilaalamuu feesisa," jedhe.
Boeing'f seerri maal agarsiisaa?
Gaaffiiwwan hedduun gaafatamaa jiru. Yoo xiqqaate himanni lama banamanii jiru, kan biroon itti aananii dhufuu danda'u.
Awurooppaa fi Indiyaan xiyyaara Boeing balaliisuu dhaaban
Himanni banaman kunneen lamaan Ralph Nader tiin ture kan banaman.
Maatii isaa keessaa tokko kan taateefi umuriin ishee ganna 24 kan taate Samyaa Stumoo, namoota 157 balaa xiyyaara ET302 tiin lubbuun darbe keessaa tokko turte. Samyaan sektera fayyaa idil-addunyaa keessa hojjetti ture.
Obbo Nader marsaa hedduu pirezedaantummaa US tiif dorgomaniiru. Ogeessa seeraa muuxannoo qabuuf Boeing irratti tarkaanfii seeraa akka fudhatu dhaadateera.
Torban darbe himanni tokko mana murtii federaalaa Chikaagootti maatii nama balaa xiyyaara Itoophiyaatiin lubbuun darbe, Jackson Musoni jedhaman lammii Ruwaandaatiin banameera.
Akka himannichaatti Boeing siisteema balalii to'atu akka hin taaneen dizaayin godheera.
Rakkoo kana furuu yaaluudhaaf Boeing maal gochuu qaba?
Akka hojjetaa balali'uu yaaluu duraanii Boeing tokkootti, yeroo sagantaa balali'uu yaaliitti, sa'aatii kumaataman lakkaa'aman balali'uun ture. Kun ammoo waggaa tokko oliif gaggeeffama.
"Daataan terabytes" yeroo balaliiwwan yaaluu turan amma qoratamuu ni danda'u.
"Paayileetii dalgaatiin waanti raawwatame hin jiru," jedha hojjetaan duraanii Boeing kun.
"Wanti nuti akka malee gaane yoo jiraatellee, nuti gareedhaan taanee mariitiin furra."
Boeing yeroo ammaa hir'ina Max kan siisteema kompiiteraa awutomaatika akka xiyyaarri hin dhaabbanne godhu furaa jira.
Xiyyaarri 'Boeing 737 Max 8' qilleensaaf mijataadha, US
Garuu adeemsi hanga dhumaatti ga'umsa ilaaluun mirkaneessuu ammaan booda cimaa ta'a. To'attoonni aveeshinii US tiin ala ta'an ammaan booda adeemsa kana keessatti cimoo ta'uu malu.
Qaamoleen to'atan biroon murtee kan Bulchiinsa Aveeshinii Federaalaa fudhachuun dirqama kan ilaallatu hin ta'u.
Ejensiin Nageenya Aveeshinii Awurooppaa (EASA), dhimma kana irratti osoo Max deebiyee amansiisaa hin ta'iin samii Awurooppaa irra akka hin balaliine yaada isaanii jijjiirratu.
Boeing irratti dhiibbaa maallaqaa akkamii fida?
Yeroo xiyyaarri 737-Max ta'an guutummaa addunyaa irraa hojii dhaabaniifi kanneen biroon kumaan lakkaa'aman ajajaman qaqqabanaa'anitti rakkoon gama maallaqaa qabaachuu malu itti caaluu mala.
Daandiiwwan qilleensaa xiyyaarri isaanii akka hojii dhaabu taasifaman beenyaa gaafachuu danda'u.
Boeing: Awurooppaa fi Indiyaanis biyyoota xiyyaara Boeing 737 Max balaliisuu dhaabanitti dabalaman